Ejipta: Ny Hetsiky ny 25 Janoary an-tsary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Janoary 2011 7:33 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, 한국어, Español, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, Italiano, Aymara, 日本語, عربي, English
Mahalaza betsaka noho ny tweets an'arivony ny sary iray, indrindra rehefa hoe voasakana ny Twitter ao Ejipta mba hanakànana ny fampitàna vaovao mikasika ny fihetsiketsehana mitranga eto Ejipta androany [Eng].
Ilay Ejiptiana mpitoraka bilaogy, Zeinobia, dia nanapa-kevitra handray ny fakantsariny ka hidina an-dalambe haka sary sy handefa azy ireny ao amin'ny kaontiny Flickr. Indreto ny sasantsasany amin'ireo sary avy aminy:
Tao Cairo, an'aliny ireo mpitandro filaminana tsinjo teny an-dalambe efa hatry ny vao maraina miaraka amin'ny fanamiana mainty mampahalàza an-dry zareo.
Ity sary ity dia nalain'i Zeinobia, ampiasàna ny creative commons license.
Andro tsy fiasàna ho an'ny firenena iray manontolo androany eto Ejipta. Malalaka be ny arabe. Na izany aza ny mpitandro filaminana dia manana ny tetiny manokana hifehezana ny fibosesehan'ny mpanao fihetsehana, indrindra fa tsy hisy ny fitohanan'ny fifamoivoizana efa mahazatra ao Cairo hanao izay fifehezana izany amin'ny toeran-dry zareo.
Ireo mpitandro filaminana dia nanakana ny ankabeazan'ireo toerana malalaka sy sampanan-dàlana tao Cairo. Navily araka izay tratra ireo fiara hankany amin'ny tetezana sy tonelina daholo , satria sarotra kokoa ny hanao fihetsiketsehana any anaty tonelina , sa tsy izany!? Ny sasany tamin'ny mpampiasa twitter dia nitatitra fa nikatona koa ny zotran-dalamby ambanin'ny tany (metro) mba hifehezana ny fibosesehan'ny mpanao fihetsiketsehana.
Rassd New Network dia namoaka sary iray mahatalanjon'ireo mpanao fihetsiketsehana tao Tahrir Square tao afovoan-tananan'i Cairo tao amin'ny pejy Facebook-ndry zareo.
Nony hariva, niakatra be tsy nisy toy izany ny isan'ireo mpanao fihetsiketsehana tao amin'ny El-Tahrir Square. Midan El-Tahrir na El-Tahrir Square dia sehatra nanaovana hetsi-panoherana sy fanehoan-kevitra goavana maro, isan'izany ny tamin'ny Martsa 2003 rehefa nirotsaka nanohitra ny ady tany Irak ny vahoaka.
Sary nalaina tao amin'ny pejy Facebook-n'ny RNN
Voalaza fa voasakana ny Twitter tamin'ny tolakandro. Talohan'izany, maro tamin'ny olona no nanam-bintana afaka nampàkatra sary tamin'ireo tolotra toy ny twitpic. @M_Na7as nampàkatra ity sary manaraka ity tao amin'ny kaontiny twitpic, mampiseho ny hamaroan'isan'ireo mpanao fihetsiketsehana miohatra amin'ny mpitandro filaminana tao an-tanànan'i El-Mahalla.
Ireo mpanao fihetsiketsehana nihodidina ireo mpitandro filaminana tao El-Mahalla. Tsara ny manamarika fa El-Mahalla dia efa nisedra ireo onjam-pitokonan'ny mpiasa, taona vitsy lasa izay.
Sary nalain'i @M_Na7as
Tany ivelan'i Ejipta koa, noraketin'ny olona tamin'ny fakantsarin-dry zareo ireo fihetsehana. @MafazAlSuwaidan nizara ity sary eto ambany ity, fihetsiketsehana nitranga tao Toronto, Canada.
Ejiptiana nanao hetsi-panoherana tao afovoan-tanànan'i Toronto mihiaka ny hoe : Hihetsika foana mandra-pahazo fandresena, hihetsika manerana ireo arabe rehetran'ny fireneko.
Sary nalain'i @MafazAlSuwaidan
Farany saingy tsy ny maivana indrindra, @TheOnlyWarman nizara sary iray maneho fiarabe iray voasesika miaramila tao amin'ny distrika milamin'i Maadi. Ny sasany tamin'ireo fiarabe tàzana teny an-dalamben'i Cairo, raha ny marina dia avy any amin'ireo fari-piadidiana tsy dia misy korontana loatra mba hanome tànana ny mpitandro filminana teo an-toerana. Ary i @alasmari nizara sary iray misy sary rotidrotiky ny filoha Ejiptiana mipetaka amin'ny iray amin'ireo takelaby fanaovana dokambarotra eny an-dàlana.
Mandritra izany, ireo Libane mpamorona tranonkala, Layal Al Khatib sy Mirelle Raad dia namorona fampitambaran-tsary iray hanangonana ireo sary nifampizaràn'ny mponin'ny aterineto momba ny hetsika ho ao amina toerana iray.
Taorian'ny nahavitan'ny tetikasa, dia nandefa tweet i Layal :
Manja be ny fiaraha-niasa tamin'i @migheille ho anà tanjona goavana iray #jan25. Ato ankehitriny ireo sary rehetra nifampizaràna tamin'ny alàlan'ny twitter> http://abaadblogs.com/imagefeed/
Ary i Mireille nanampy hoe:
Aleo ho hitan'izao tontolo izao, efa sary 423 avy amin'ny hetsik'i Ejipta #jan25 ao amin'ny http://goo.gl/diwO8, miangavy mba zarao ny anaran'ireo olona mandefa sary mivantana amin'ny alàlan'ny tweet.